Sidee ayaan ku ogaan karaa rabiotaanka Illaah ee nolosheyda? Muxuu ka dhahay Baybalka ogaanshaha rabitaanka Illaah?
Waa maxay masiixi?
Ilaah ma Jiraa?
Waa kuma Ciise Masiixi?
Midab khafiif ah Midab madow
Font HeerkaArialVerdanaHelveticaTahomaGeorgiaTimes New Roman
Dhererka xariiqda Heerka1.01.21.52
Cabbirka farta Heerka1.01.21.52
Ma heshay nolol waarta?
Ma Heshay Cafis?
Waa muhiim in la ogaado rabitaanka Illaah. Ciise wuxuu yiri in Xiriirkiisa dhabta ah ay yihiin kuwa og oo sameeyo rabitaankla Aaabaha: “Cid walba oo sameyso rabitaanka Illaah waa walaalkeyga iyo walaasheyda iyo hooyadeyda” (Markos 3:35). Masaalkaan ee labada wiil, Ciise wuxuu canaantay madaxa wadaadada iyo waayeelada ee ku guuldareystay rabitaanka Aabaha; gaar ahaan, kama “aysan ka towbad keenin oo ma aaminin” (Matayos 21:32). Inteeda aasaaska ah, rabitaanka Illaah waa ka towbad keenka dambiyadeena iyo aaminaada iyo aaminaada Masiixi. Haddii aanan qaadan tallaabada ugu horeyso, kadib weli maanan ogolaanin rabitaanka Illaah.
Markii aan ku qaabilno Masiixi aaminaad ahaan, waxaa ka sameysannahay carruurta Illaah (Yooxanaa 1:12), iyo wuxuu rabooday inuu nagu hogaamiyo wadadiisa (Sabuurradii 143:10). Illaah iskuma dayayo inuu qariyi Rabitaankiisa ee inaga naga imaanayo; Wuxuu rabaa inuu muujiyo. Xaqiiqda, Wuxuu mar hore nasiiyay wax badan, jaheyno bafdan ee Eraygiisa. Waa inaan “siinaa mahadcelin oo xaaladaha oo dhan; oo kani inuu yahay rabitaanka Illaah ee adiga” (1 Tesaloniika 5:18). Waa inaan sameynaa shaqooyinka wanaagsan (1 Butros 2:15). Iyo “waa rabitaanka Illaah ee ah inaad quduus ahaataa: ee ah inaad ka fogaataa galmada xaaraanta ah” (1 Tesaloniika 4:3).
Rabitaanka Illaah waa la ogaan karaa iyo la muujin karaa. Rooma 12:2 wuxuu yiri, “Ha raacin muddo kale oo dheer aqaabka aduunkaan, laakin ku badelmay cusbooneysiinta maskaxdaada. Kadib waxaa kuu suurtogaleyso inaad tijaabisid oo cadeynsid waxa rabitaanka Illaah yahay—Wanaagiisa, farxadgelinayo iyo rabitaan wanaagsan.” Mareenkaan wuxuu na siiyaa muhiimadao isku xiggo: canuga Illaah wuu diiday inuu raaco aduunka iyo badelkii u ogolaado nafsadiisa inuu noqdo Ruux. Sida maskaxdaan lagu cusbooneysiiyay sida waafaqsan waxyaabaha Illaah, kadib wuu logaan karaa rabitaanka wanaagsan ee Illaah.
Sida aan u raadineyno rabiytaanka Illaah, waa inaan hubinaa waxa aan u tioxgelineyno kinaysan aheyn wax Baybalka mamnuucay. Tusaale ahaan, Baybalka wuu manuucay xatooyada; maadaama illaah wuxuu si cad uga hadlay arinta, waan ognahay waa not rabitaankiisa ee aan noqono bangi dhacayaal—xitaa looma baahno inaan ku tukuno. Sidoo kale, waa inaan hubinaa waxa aan u tixgelineyno rabitaanka Illaah ammaanto oo nagu caawiso inaga iyo dadka kale inaan ku ,korno ruux ahaan.
Ogaanshaha rabitaanka Illaah mararka qaar way adagtahay sababtoo ah waxay u baahantahay dulqaadka. Waa dabiici in la raboodo dhammaan rabitaanka Illaah oo hal mar, laakin ma ahan sida caadi ahaa Uu u shaqeeyo. Wuxuu noo sheegay gtallaabada waqtiga—dhaqaaq walba tallaabada aaminaada—iyo noo ogolaado inaan joogteyno inaan siiw wadno inaan Isaga aamino. Sheyga ugu muhiimsan waa mid, sida aan sugeyno jaheyn dheeraad ah, waxaan ku mashquulsannahay sameynta wanaaga aan garaneyno inaan sameyno (Yacquub 4:17).
Sida badan, swaxaan rabnaa inuu Illaah na siiyo gaararka—halka laga shaqeeyo, halka lagu noolaado, cida laguursanayo, gaariga la iibsanayo, iwm. Illaah wuxuu n oo ogolaanayaa inaan dooqyo sameyno, iyo, haddii aan ku qeylino Isaga, wuxuu leeyahay qaabab looga hortagayo dooqyada qaldan (fiiri Falimaha Rasuullada16:6-7).
Sida wanaagsan ee aan qofka u barano, skida badan ee aan u ogaano rabkitaanadiisa ama rabotaanadeeda. Tusaale ahaan, canug ayaa eegi karo dhinaca wado mashquulsan oo balooniga ugu dhacday, laakin madaba carraro, sababtoo ah wuu ogyahay “in aabaheyga uusan rabin inaan sidaas sameeyo.” Looma baahno inuu weydiiyo aabhihiisa tallo oo xaalad walboo gaar ah; wuu ogyahay waxa aabihiisa uu dhahayo sababtoo ah wjuu ogyahay aabihihiisa. Isla sidaas ayaa run ku ah xiriirka Illaah. Inaga oo la lugeyno illaah, cadeecida Eraygiisa iyo ku tiirsanaanta ruuxiisa, waxaan ogaanay inaan siineyno maskaxda Masiixi (1 Korintos 2:16). Waan ognahay isaga, iyo taasi waxay nagu caawisaa inaan ogaano rabitaankisa. Waxaan helnaa jaheynta Illaah oo si diyaar ah loo heli karo. “Saxnaanta eedeyn la'aanta waxay ka dhigtaa wadadooda mid toosan, / laakin kuwa sharta ah waxaa la keenaa hoosta xumaantooda” (Maahmaahyadii 11:5).
Haddii aan ku lugeyneyno meel u dhow Illaah oo si run ah u ogaansanayo Rabitaankiisa nololaheena, Illaah wuxuu ku meeleynayaa Rabitaankiisa ee qalbigeena. Furaha wuxuu rabaa rabitaanka Illaah, ma ahan nafsadeena. “Rahmada nafsadaada ee ILLAAH iyo wuxuu ku siinayaa rabotaanada qalbigaaga” (Sabuurradii 37:4).
Ku noqo bogga Soomaliga